” ကျွန်တော်တို့ သရေရလဒ်ထက် ပိုမိုထိုက်တန်ခဲ့ပါတယ်။” နှစ်ဂိုးအရှုံးကနေ ပြန်လာနိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ် မှတ်ချက်ပေးလိုက်တဲ့ #အူဘာမီယန်း - SPORTS MYANMAR
” ကျွန်တော်တို့ သရေရလဒ်ထက် ပိုမိုထိုက်တန်ခဲ့ပါတယ်။” နှစ်ဂိုးအရှုံးကနေ ပြန်လာနိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ် မှတ်ချက်ပေးလိုက်တဲ့ #အူဘာမီယန်း
ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ( ၄ ) ရဲ့အကောင်းဆုံး ပွဲစဉ်တစ်ပွဲ ဖြစ်တဲ့ အာဆင်နယ် အသင်း နဲ့ တော့တင်ဟမ် အသင်းတို့ရဲ့ မြောက်လန်ဒန်ဒါဘီကတော့ တစ်ဖက် နှစ်ဂိုးစီ သရေရလဒ်နဲ့သာ ပွဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဧည့်သည် စပါးအသင်းဟာ အဲရစ်ဆင်၊ဟယ်ရီကိန်းတို့ရဲ့ ဂိုးတွေနဲ့ ပွဲကို ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် အာဆင်နယ် အသင်းက အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်းတွေနဲ့ ပြန်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အာဆင်နယ် အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ အမ်းမရိတ်မှာ ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ တုန်းကလည်း ပထမပိုင်းမှာ ၁-၂ နဲ့ ရှုံးနိမ့် နေပေမယ့် ဒုတိယပိုင်းမှာ အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ ပြန်လာနိုင်ခဲ့ပြီး လေးဂိုး နှစ်ဂိုး နဲ့ ဂိုးပြတ် အနိုင် ရရှိအောင် စွမ်းဆောင် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီရာသီမှာလည်း အာဆင်နယ် အသင်းဟာ ဒုတိယပိုင်းမှာ ဂိုးရဖို့ အခွင့်အရေး အများအပြား ရခဲ့ပေမယ့် စပါး ဂိုးသမား လိုရစ်ရဲ့ လက်စွမ်းပြ ကာကွယ်မှု နဲ့ နီကိုလပ်စ်ပီပီ၊မီခီတာရန်း တို့ရဲ့ အဆုံးသတ်ပိုင်း အားနည်းမှုကြောင့် သရေရလဒ်နဲ့သာ ကျေနပ် ခဲ့ရတာပါ။
အာဆင်နယ် အသင်းအတွက် အရေးပါတဲ့ ဒုတိယ ချေပဂိုးကို သွင်းယူ ပေးခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှုး အူဘာမီယန်းက ပွဲအပြီး အင်တာဗျူးမှာ လန်ဒန် ဒါဘီမှာ သရေရလဒ်ထက် ပိုမို ထိုက်တန်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြသနိုင်ခဲ့ကြောင်း နဲ့ သူ့ရဲ့ ဂိုးကို ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ လူငယ်ကွင်းလယ်လူ ဂွမ်ဒူဇီကိုလည်း ချီးကျူး သွားခဲ့ပါတယ်။
အူဘာမီယန်း က နှစ်ဂိုးအရှုံးကနေ သရေပြန်ကစားနိုင်ခဲ့တဲ့ အပေါ် ” ပထမပိုင်းမှာ ကျနော်တို့ သွင်းဂိုး နှစ်ဂိုးလောက် ရခဲ့သင့်တာပါ။ဒါပေမယ့် ရအောင် မသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက် မပျော်ရွှင်မိပါဘူး၊ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ အားလုံး ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ ပွဲမှာ အကောင်းဆုံး ကစားပုံ ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျနော်တို့ သရေရလဒ်ထက် ပိုမို ထိုက်တန်ခဲ့ပါတယ်။”
Arsenal’s Gabonese striker Pierre-Emerick Aubameyang (R) celebrates with Arsenal’s French midfielder Matteo Guendouzi (L) after scoring their second goal during the English Premier League football match between Arsenal and Tottenham Hotspur at the Emirates Stadium in London on September 1, 2019. (Photo by Ian KINGTON / IKIMAGES / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or ‘live’ services. Online in-match use limited to 45 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.
” နှစ်ဂိုးပေးလိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာ ကျနော်တို့ သူတို့ကို ပြန်လည် ဖိအားပေး ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လာကာက ပထမ ချေပဂိုး သွင်းယူ ခဲ့ပြီး ဒုတိယပိုင်းမှာလည်း အခွင့်အရေးတစ်ချို့ ရခဲ့သလို နောက်ထပ် ချေပဂိုး တစ်ဂိုးလည်း သွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တတိယဂိုး ရနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးတွေလည်း ရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ကျနော် ခုနက ပြောသလိုပဲပေါ့၊ကျနော်တို့အတွက် ခက်ခဲတဲ့ ပွဲတစ်ပွဲ ဖြစ်ခဲ့ပြီး သရေကျသွားခဲ့ရပါတယ်။”
ဆက်လက်ပြီး အူဘာမီယန်းက လာကာဇက် ရဲ့ သွင်းဂိုးဟာ ပြန်လာနိုင်ဖို့ အဓိက ကျခဲ့ကြောင်း ဆိုပါတယ်။” ပထမပိုင်း အပြီး အဝတ်လဲခန်း ပြန်တဲ့ အချိန်မှာ ကျနော်တို့ သွင်းဂိုးတစ်ဂိုး ရထားတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ခံစားချက်က သိပ်ကောင်းပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာ အကောင်းဆုံး ပုံစံနဲ့ ပြန်လာဖို့ ခွန်အားရလိုက်သလိုပါပဲ။ဒါကြောင့် လာကာ ဂိုးက အရမ်းအရေးပါတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။”
သူ့ရဲ့ သွင်းဂိုးကို ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ ဂွမ်ဒူဇီရဲ့ ပေးပို့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ” တကယ့်ကို ကောင်းမွန်တဲ့ ဘောလုံး ပေးပို့မှုပါ။သူ ကျနော့်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကျနော် အချိန်ကိုက် ပြေးထွက်ရမယ်ဆိုတာ သိလိုက်ပါတယ်။သူ ပေးလိုက်တဲ့ ဘောလုံးက လုံးဝ ကွက်တိပါပဲ၊ကျနော် ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တာက သူ့ရဲ့ ပေးပို့မှု ကောင်းလို့ပါဗျာ။” လို့ ပြောကြား သွားခဲ့ပါတယ်။
” ကြှနျတျောတို့ သရရေလဒျထကျ ပိုမိုထိုကျတနျခဲ့ပါတယျ။” နှဈဂိုးအရှုံးကနေ ပွနျလာနိုငျခဲ့တဲ့အပျေါ မှတျခကျြပေးလိုကျတဲ့ #အူဘာမီယနျး
ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျ ( ၄ ) ရဲ့အကောငျးဆုံး ပှဲစဉျတဈပှဲ ဖွဈတဲ့ အာဆငျနယျ အသငျး နဲ့ တော့တငျဟမျ အသငျးတို့ရဲ့ မွောကျလနျဒနျဒါဘီကတော့ တဈဖကျ နှဈဂိုးစီ သရရေလဒျနဲ့သာ ပှဲပွီးဆုံးသှားခဲ့ပါတယျ။ဧညျ့သညျ စပါးအသငျးဟာ အဲရဈဆငျ၊ဟယျရီကိနျးတို့ရဲ့ ဂိုးတှနေဲ့ ပှဲကို ဦးဆောငျနိုငျခဲ့ပမေယျ့ အာဆငျနယျ အသငျးက အကောငျးဆုံး ခွစှေမျးတှနေဲ့ ပွနျလာနိုငျခဲ့ပါတယျ။
အာဆငျနယျ အသငျးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီ အမျးမရိတျမှာ ကစားခဲ့တဲ့ပှဲမှာ တုနျးကလညျး ပထမပိုငျးမှာ ၁-၂ နဲ့ ရှုံးနိမျ့ နပေမေယျ့ ဒုတိယပိုငျးမှာ အကောငျးဆုံးပုံစံနဲ့ ပွနျလာနိုငျခဲ့ပွီး လေးဂိုး နှဈဂိုး နဲ့ ဂိုးပွတျ အနိုငျ ရရှိအောငျ စှမျးဆောငျ နိုငျခဲ့ပါတယျ။
ဒီရာသီမှာလညျး အာဆငျနယျ အသငျးဟာ ဒုတိယပိုငျးမှာ ဂိုးရဖို့ အခှငျ့အရေး အမြားအပွား ရခဲ့ပမေယျ့ စပါး ဂိုးသမား လိုရဈရဲ့ လကျစှမျးပွ ကာကှယျမှု နဲ့ နီကိုလပျဈပီပီ၊မီခီတာရနျး တို့ရဲ့ အဆုံးသတျပိုငျး အားနညျးမှုကွောငျ့ သရရေလဒျနဲ့သာ ကနြေပျ ခဲ့ရတာပါ။
အာဆငျနယျ အသငျးအတှကျ အရေးပါတဲ့ ဒုတိယ ခပြေဂိုးကို သှငျးယူ ပေးခဲ့တဲ့ တိုကျစဈမှုး အူဘာမီယနျးက ပှဲအပွီး အငျတာဗြူးမှာ လနျဒနျ ဒါဘီမှာ သရရေလဒျထကျ ပိုမို ထိုကျတနျတဲ့ စှမျးဆောငျရညျကို ပွသနိုငျခဲ့ကွောငျး နဲ့ သူ့ရဲ့ ဂိုးကို ဖနျတီးပေးခဲ့တဲ့ လူငယျကှငျးလယျလူ ဂှမျဒူဇီကိုလညျး ခြီးကြူး သှားခဲ့ပါတယျ။
အူဘာမီယနျး က နှဈဂိုးအရှုံးကနေ သရပွေနျကစားနိုငျခဲ့တဲ့ အပျေါ ” ပထမပိုငျးမှာ ကနြျောတို့ သှငျးဂိုး နှဈဂိုးလောကျ ရခဲ့သငျ့တာပါ။ဒါပမေယျ့ ရအောငျ မသှငျးနိုငျခဲ့တဲ့ အတှကျ မပြျောရှငျမိပါဘူး၊ဒါပမေယျ့ ကနြျောတို့ အားလုံး ဒီလိုခကျခဲတဲ့ ပှဲမှာ အကောငျးဆုံး ကစားပုံ ပွသနိုငျခဲ့ပါတယျ။ကနြျောတို့ သရရေလဒျထကျ ပိုမို ထိုကျတနျခဲ့ပါတယျ။”
” နှဈဂိုးပေးလိုကျရတဲ့ အခြိနျမှာ ကနြျောတို့ သူတို့ကို ပွနျလညျ ဖိအားပေး ကစားနိုငျခဲ့ပါတယျ။လာကာက ပထမ ခပြေဂိုး သှငျးယူ ခဲ့ပွီး ဒုတိယပိုငျးမှာလညျး အခှငျ့အရေးတဈခြို့ ရခဲ့သလို နောကျထပျ ခပြေဂိုး တဈဂိုးလညျး သှငျးယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။တတိယဂိုး ရနိုငျမယျ့ အခှငျ့အရေးတှလေညျး ရခဲ့ပါတယျ။ဒါပမေယျ့ ကနြျော ခုနက ပွောသလိုပဲပေါ့၊ကနြျောတို့အတှကျ ခကျခဲတဲ့ ပှဲတဈပှဲ ဖွဈခဲ့ပွီး သရကေသြှားခဲ့ရပါတယျ။”
ဆကျလကျပွီး အူဘာမီယနျးက လာကာဇကျ ရဲ့ သှငျးဂိုးဟာ ပွနျလာနိုငျဖို့ အဓိက ကခြဲ့ကွောငျး ဆိုပါတယျ။” ပထမပိုငျး အပွီး အဝတျလဲခနျး ပွနျတဲ့ အခြိနျမှာ ကနြျောတို့ သှငျးဂိုးတဈဂိုး ရထားတယျဆိုတဲ့ စိတျခံစားခကျြက သိပျကောငျးပါတယျ။ဒုတိယပိုငျးမှာ အကောငျးဆုံး ပုံစံနဲ့ ပွနျလာဖို့ ခှနျအားရလိုကျသလိုပါပဲ။ဒါကွောငျ့ လာကာ ဂိုးက အရမျးအရေးပါတယျလို့ မွငျပါတယျ။”
သူ့ရဲ့ သှငျးဂိုးကို ဖနျတီးပေးခဲ့တဲ့ ဂှမျဒူဇီရဲ့ ပေးပို့မှုနဲ့ပတျသကျပွီး ” တကယျ့ကို ကောငျးမှနျတဲ့ ဘောလုံး ပေးပို့မှုပါ။သူ ကနြေျာ့ကို လှမျးကွညျ့လိုကျတဲ့ အခြိနျမှာ ကနြျော အခြိနျကိုကျ ပွေးထှကျရမယျဆိုတာ သိလိုကျပါတယျ။သူ ပေးလိုကျတဲ့ ဘောလုံးက လုံးဝ ကှကျတိပါပဲ၊ကနြျော ဂိုးသှငျးနိုငျခဲ့တာက သူ့ရဲ့ ပေးပို့မှု ကောငျးလို့ပါဗြာ။” လို့ ပွောကွား သှားခဲ့ပါတယျ။